၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ အမှတ်ရစရာဖြစ်ရပ်များ
16 Jul 2018 . 2:43 PM
၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲကတော့ ပြင်သစ်အသင်းဟာ ခရိုအေးရှားအသင်းကို (၄-၂)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ယူပြီး ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံဆုကို ဒုတိယအကြိမ်ဆွတ်ခူးခဲ့ခြင်းနှင့်အတူ ကန့်လန့်ကာချသွားခဲ့ပါပြီ။ (၁)လကြာကျင်းပခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ကမ္ဘာ့ပြိုင်ပွဲမှာ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်ရပ်တွေက ဒုနဲ့ဒေးပါပဲ။ ဗိုလ်စွဲဖို့ ရေပန်းစားတဲ့အသင်းတွေ မှန်းချက်နဲ့နှမ်းထွက်မကိုက်ခဲ့တာ၊ လက်ရှိချန်ပီယံဂျာမနီအသင်း အုပ်စုအဆင့်ကပဲ လှည့်ပြန်ခဲ့ရတာ၊ ကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမားတွေဖြစ်တဲ့ မက်ဆီ Messi ၊ စီရော်နယ်လ်ဒို C.Ronaldo ၊ နေမာ Neymar ပရိသတ်တွေ မျှော်လင့်သလို အောင်မြင်မှုမရခဲ့တာ စသဖြင့်ပေ့ါ။ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက် အမှတ်ရစရာဖြစ်ရပ်တွေထဲက ပရိသတ်နဲ့အကြိုက်တူမယ့်အဖြစ်အပျက်တွေကို ပြန်လည်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ် . . .
၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ ပရိသတ်တွေရဲ့ အာရုံကို စတင်ဖမ်းစားခဲ့တဲ့သူက ထုံးစံအတိုင်း စီရော်နယ်လ်ဒိုပါပဲ။ စပိန်နဲ့(၃)ဂိုးစီသရေကျခဲ့တဲ့ အုပ်စုအဖွင့်ပွဲမှာ ဟက်ထရစ်သွင်းယူပြီး ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ ပထမဆုံးဟက်ထရစ်ပိုင်ရှင်၊ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့အသက်အကြီးဆုံး(၃၃နှစ်)ဟက်ထရစ်သွင်းယူသူအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တယ်။ ဒါ့အပြင် စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ အဓိက နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲ(၈)ကြိမ်(ယူရို-၂၀၀၄၊ ၂၀၀၆ ကမ္ဘာ့ဖလား၊ ယူရို-၂၀၀၈၊ ၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ဖလား၊ ယူရို-၂၀၁၂၊ ၂၀၁၄ ကမ္ဘာ့ဖလား၊ ယူရို-၂၀၁၆၊ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလား)ဆက် ဂိုးသွင်းခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးကစားသမားအဖြစ် စံချိန်တင်နိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်။
အိုက်စလန်နဲ့ပွဲမှာ အရည်ပျော်သွားတဲ့ သံမဏိ မက်ဆီ
မက်ဆီဆိုတာ ပြိုင်ဘက်အသင်းတိုင်းရဲ့ အိပ်မက်ဆိုး၊ နတ်ဆိုးတစ်ပါးလို့ တင်စားခံခဲ့ရသူ။ သွင်းဂိုးတစ်ဂိုးရဖို့ဆိုတာ မက်ဆီအတွက် လွယ်ကူလွန်းတဲ့အရာတစ်ခု။ ဒါပေမဲ့ အိုက်စလန်နဲ့ပွဲမှာ သံမဏိမက်ဆီ အရည်ပျော်သွားခဲ့တယ်။ ဘောလုံးသမားစစ်စစ်ဆိုလို့ လက်ချိုးရေလို့ရတဲ့ အိုက်စလန်အသင်းက မက်ဆီဆိုတဲ့ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားကို ထိပ်ပုတ်ခဲ့တယ်။ ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာအဖြစ်ကနေ ဂိုးသမားအဖြစ် ဘ၀ပြောင်းလဲခဲ့တဲ့ အိုက်စလန်ဂိုးသမား ဟယ်လ်ဒေါ်ဆန် Halldorsson က မက်ဆီရဲ့ ပယ်နယ်တီ ပယ်နယ်တီကို ကာကွယ်ပြီး သူရဲကောင်းဘွဲ့ခံယူသွားတယ်။ နောက်တစ်ခါ အိုက်စလန်နဲ့တွေ့ရင် ပြန်လက်စားချေနိုင်ဖို့ မက်ဆီ ဆန္ဒရှိနေမလား . .
ဗီလိန်ကနေ ဟီရိုးဖြစ်ခဲ့တဲ့ တိုနီကရူးစ် Toni Kroos
ဂျာမနီအသင်း အုပ်စုကထွက်ခဲ့ရတဲ့အတွက် လက်ညှိုးထိုးခံခဲ့ရသူတွေထဲမှာ တိုနီကရူးစ် Toni Kroos လည်း အပါအ၀င်ပါ။ ဆွီဒင်ကို (၂-၁)ဂိုးနဲ့အနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲမှာလည်း ဗီလိန်အဖြစ်နဲ့ တံဆိပ်ကပ်ခံရမယ့်ဆဲဆဲမှာ Magic Free kick ဂိုးကြောင့် ဟီရိုးပြန်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဆွီဒင်အသင်းရခဲ့တဲ့ အဖွင့်ဂိုးက ကရူးစ်ရဲ့ လူပေးမှားမှု၊ Marking ညံ့ဖျင်းမှုတို့ကြောင့် ပေးခဲ့ရတာဖြစ်ပေမယ့် နောက်ဆုံးမိနစ်မှာ ဂျာမနီတို့ရဲ့ နိုင်ပွဲကို ယူဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။
အုပ်စုက အရှက်တကွဲထွက်ခဲ့ရတဲ့ ဂျာမနီ
ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ လက်ရှိချန်ပီယံအသင်းတွေ အုပ်စုအဆင့်က စောစောစီးစီးထွက်ခဲ့ရဖူးတဲ့ ကြမ္မာဆိုးက ဂျာမနီအသင်းကိုလည်း ရိုက်ခတ်ခဲ့တယ်။ တိတိကျကျပြောရရင် ၂၀၀၆ ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ ဘရာဇီးလ်ကလွဲလို့ ၂၀၀၂-ပြင်သစ်၊ ၂၀၁၀-အီတလီ၊ ၂၀၁၄-စပိန်၊ ၂၀၁၈-ဂျာမနီ တို့က အုပ်စုကထွက်ခဲ့ရတယ်။ နောက်တစ်ခုက ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ နှစ်ကြိမ်ဆက်ဗိုလ်စွဲတဲ့အသင်းမရှိတာ (၅၆)နှစ်ကြာနေပြီ။ ဂျာမနီအသင်းအတွက် ကြမ္မာဆိုးတွေကို ယူဆောင်လာခဲ့တဲ့အသင်းက တောင်ကိုရီးယား။ ၂၀၀၂ ကမ္ဘာ့ဖလားဆီမီးဖိုင်နယ်တုန်းက အနိုင်ယူခဲ့တဲ့ ဂျာမန်တွေကို လှလှပပကြီး ပြန်လက်စားချေနိုင်ခဲ့တဲ့အပြင် လက်ရှိချန်ပီယံအသင်းကို သူတို့နဲ့အတူ အိမ်ပြန်ရအောင် လုပ်ပြခဲ့တယ်။
ပယ်နယ်တီကျိန်စာဆိုး ပျက်ပြယ်ခဲ့တဲ့ အင်္ဂလန်
အင်္ဂလန်အသင်းအတွက် ပယ်နယ်တီအဆုံးအဖြတ်ခံပြီဆိုရင် ရှုံးဖို့က (၈၀)ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိ သေချာနေပြီလို့ ဆိုရမယ်။ အခုကမ္ဘာ့ဖလားမတိုင်ခင် အဓိကနိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲနောက်ဆုံး(၁၂)ကြိမ်မှာ အင်္ဂလန်အသင်း ပယ်နယ်တီအဆုံးအဖြတ် ခံယူခဲ့ရတာက (၆)ပွဲရှိခဲ့ပြီး တစ်ကြိမ်သာ အနိုင်ရခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါကြောင့် ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလား ရှုံးထွက်(၁၆)သင်းအဆင့်ပွဲအဖြစ် ကိုလံဘီယာနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတုန်းက ပယ်နယ်တီအဆုံးအဖြတ် ခံယူခဲ့ရတဲ့အတွက် ဒီတစ်ကြိမ်မှာရော ပယ်နယ်တီကျိန်စာဆိုးက အသက်ဝင်နေဦးမလားဆိုပြီး အင်္ဂလန်ပရိသတ်တွေ ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အင်္ဂလန်အသင်း ပယ်နယ်တီကြမ္မာဆိုးကို ချေဖျက်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကိုလံဘီယာကို (၃-၄)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရပြီး ဂိုးသမား ပစ်ဖို့ဒ် Pickford က အင်္ဂလန်အသင်းရဲ့ သူရဲကောင်းဖြစ်ခဲ့ရတယ်။
Flash သို့မဟုတ် ဘာပေ Mbappe
Super Hero တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Flash ကို ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ ပရိသတ်တွေ မြင်တွေ့လိုက်ရဲ့လား။ ပြင်သစ်အသင်းရဲ့လူငယ်ကြယ်ပွင့် ဘာပေ Mbappe ဟာ ပြင်ပလောကက Flash လို Hero တစ်ဦးလို့ တင်စားရင် မှားမယ်မထင်ပါဘူး။ သူ့ရဲ့ လျင်မြန်တဲ့ပြေးအားကြောင့် ပြိုင်ဘက်အသင်းက ခံစစ်ကစားသမားတွေ အလဲအလဲအပြိုပြိုဖြစ်ခဲ့ရတာက မနည်းမနောပါ။ ဗိုလ်လုပွဲမှာ ဂိုးသွင်းပြီးချိန်မှာ ၁၉၅၈ က ဘရာဇီ်းလ် ဂန္ထ၀င်ပီလီ Pele နောက်ပိုင်း ကမ္ဘာ့ဖလားဗိုလ်လုပွဲရဲ့အသက်အငယ်ဆုံးဂိုးသွင်းသူ၊ ကမ္ဘာ့ဖလားဗိုလ်လုပွဲမှာ ပါဝင်ကစားခဲ့တဲ့ တတိယမြောက် ဆယ်ကျော်သက်ကစားသမား စတဲ့ဂုဏ်ပုဒ်တွေအပြင် ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ အကောင်းဆုံးလူငယ်ကစားသမားဆုကိုပါ ရယူခဲ့တယ်။
ကဲ. ..ပရိသတ်ကြီးရေ။ အခုဖော်ပြခဲ့တာက ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲက အမှတ်ရစရာဖြစ်ရပ်တွေထဲက တချို့ကို ဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်တာကြောင့် ကျန်ခဲ့တာတွေလည်း ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။ ပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်း ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ ကိုယ့်စိတ်ထဲ စွဲထင်ကျန်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကို ပြောပြခဲ့ပါဦးလား . .
Photo:Golazzoo,Sporting News,The Independent,DNA India
၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲရဲ့ အမှတျရစရာဖွဈရပျမြား
၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲကတော့ ပွငျသဈအသငျးဟာ ခရိုအေးရှားအသငျးကို (၄-၂)ဂိုးနဲ့ အနိုငျယူပွီး ကမ်ဘာ့ဖလားခနျြပီယံဆုကို ဒုတိယအကွိမျဆှတျခူးခဲ့ခွငျးနှငျ့အတူ ကနျ့လနျ့ကာခသြှားခဲ့ပါပွီ။ (၁)လကွာကငျြးပခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ကမ်ဘာ့ပွိုငျပှဲမှာ ရငျခုနျစိတျလှုပျရှားစရာဖွဈရပျတှကေ ဒုနဲ့ဒေးပါပဲ။ ဗိုလျစှဲဖို့ ရပေနျးစားတဲ့အသငျးတှေ မှနျးခကျြနဲ့နှမျးထှကျမကိုကျခဲ့တာ၊ လကျရှိခနျြပီယံဂြာမနီအသငျး အုပျစုအဆငျ့ကပဲ လှညျ့ပွနျခဲ့ရတာ၊ ကမ်ဘာကြျောဘောလုံးသမားတှဖွေဈတဲ့ မကျဆီ Messi ၊ စီရျောနယျလျဒို C.Ronaldo ၊ နမော Neymar ပရိသတျတှေ မြှျောလငျ့သလို အောငျမွငျမှုမရခဲ့တာ စသဖွငျ့ပေ့ါ။ ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲတဈလြှောကျ အမှတျရစရာဖွဈရပျတှထေဲက ပရိသတျနဲ့အကွိုကျတူမယျ့အဖွဈအပကျြတှကေို ပွနျလညျဖျောပွလိုကျပါတယျ . . .
၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲမှာ ပရိသတျတှရေဲ့ အာရုံကို စတငျဖမျးစားခဲ့တဲ့သူက ထုံးစံအတိုငျး စီရျောနယျလျဒိုပါပဲ။ စပိနျနဲ့(၃)ဂိုးစီသရကေခြဲ့တဲ့ အုပျစုအဖှငျ့ပှဲမှာ ဟကျထရဈသှငျးယူပွီး ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲရဲ့ ပထမဆုံးဟကျထရဈပိုငျရှငျ၊ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲရဲ့အသကျအကွီးဆုံး(၃၃နှဈ)ဟကျထရဈသှငျးယူသူအဖွဈ မှတျတမျးဝငျခဲ့တယျ။ ဒါ့အပွငျ စီရျောနယျလျဒိုဟာ အဓိက နိုငျငံတကာပွိုငျပှဲ(၈)ကွိမျ(ယူရို-၂၀၀၄၊ ၂၀၀၆ ကမ်ဘာ့ဖလား၊ ယူရို-၂၀၀၈၊ ၂၀၁၀ ကမ်ဘာ့ဖလား၊ ယူရို-၂၀၁၂၊ ၂၀၁၄ ကမ်ဘာ့ဖလား၊ ယူရို-၂၀၁၆၊ ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလား)ဆကျ ဂိုးသှငျးခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးကစားသမားအဖွဈ စံခြိနျတငျနိုငျခဲ့ပါသေးတယျ။
အိုကျစလနျနဲ့ပှဲမှာ အရညျပြျောသှားတဲ့ သံမဏိ မကျဆီ
မကျဆီဆိုတာ ပွိုငျဘကျအသငျးတိုငျးရဲ့ အိပျမကျဆိုး၊ နတျဆိုးတဈပါးလို့ တငျစားခံခဲ့ရသူ။ သှငျးဂိုးတဈဂိုးရဖို့ဆိုတာ မကျဆီအတှကျ လှယျကူလှနျးတဲ့အရာတဈခု။ ဒါပမေဲ့ အိုကျစလနျနဲ့ပှဲမှာ သံမဏိမကျဆီ အရညျပြျောသှားခဲ့တယျ။ ဘောလုံးသမားစဈစဈဆိုလို့ လကျခြိုးရလေို့ရတဲ့ အိုကျစလနျအသငျးက မကျဆီဆိုတဲ့ ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံးဘောလုံးသမားကို ထိပျပုတျခဲ့တယျ။ ရုပျရှငျဒါရိုကျတာအဖွဈကနေ ဂိုးသမားအဖွဈ ဘဝပွောငျးလဲခဲ့တဲ့ အိုကျစလနျဂိုးသမား ဟယျလျဒျေါဆနျ Halldorsson က မကျဆီရဲ့ ပယျနယျတီ ပယျနယျတီကို ကာကှယျပွီး သူရဲကောငျးဘှဲ့ခံယူသှားတယျ။ နောကျတဈခါ အိုကျစလနျနဲ့တှရေ့ငျ ပွနျလကျစားခနြေိုငျဖို့ မကျဆီ ဆန်ဒရှိနမေလား . .
ဗီလိနျကနေ ဟီရိုးဖွဈခဲ့တဲ့ တိုနီကရူးဈ Toni Kroos
ဂြာမနီအသငျး အုပျစုကထှကျခဲ့ရတဲ့အတှကျ လကျညှိုးထိုးခံခဲ့ရသူတှထေဲမှာ တိုနီကရူးဈ Toni Kroos လညျး အပါအဝငျပါ။ ဆှီဒငျကို (၂-၁)ဂိုးနဲ့အနိုငျရခဲ့တဲ့ပှဲမှာလညျး ဗီလိနျအဖွဈနဲ့ တံဆိပျကပျခံရမယျ့ဆဲဆဲမှာ Magic Free kick ဂိုးကွောငျ့ ဟီရိုးပွနျဖွဈခဲ့တယျ။ ဆှီဒငျအသငျးရခဲ့တဲ့ အဖှငျ့ဂိုးက ကရူးဈရဲ့ လူပေးမှားမှု၊ Marking ညံ့ဖငျြးမှုတို့ကွောငျ့ ပေးခဲ့ရတာဖွဈပမေယျ့ နောကျဆုံးမိနဈမှာ ဂြာမနီတို့ရဲ့ နိုငျပှဲကို ယူဆောငျပေးနိုငျခဲ့တယျ။
အုပျစုက အရှကျတကှဲထှကျခဲ့ရတဲ့ ဂြာမနီ
ကမ်ဘာ့ဖလားမှာ လကျရှိခနျြပီယံအသငျးတှေ အုပျစုအဆငျ့က စောစောစီးစီးထှကျခဲ့ရဖူးတဲ့ ကွမ်မာဆိုးက ဂြာမနီအသငျးကိုလညျး ရိုကျခတျခဲ့တယျ။ တိတိကကြပြွောရရငျ ၂၀၀၆ ကမ်ဘာ့ဖလားမှာ ဘရာဇီးလျကလှဲလို့ ၂၀၀၂-ပွငျသဈ၊ ၂၀၁၀-အီတလီ၊ ၂၀၁၄-စပိနျ၊ ၂၀၁၈-ဂြာမနီ တို့က အုပျစုကထှကျခဲ့ရတယျ။ နောကျတဈခုက ကမ်ဘာ့ဖလားမှာ နှဈကွိမျဆကျဗိုလျစှဲတဲ့အသငျးမရှိတာ (၅၆)နှဈကွာနပွေီ။ ဂြာမနီအသငျးအတှကျ ကွမ်မာဆိုးတှကေို ယူဆောငျလာခဲ့တဲ့အသငျးက တောငျကိုရီးယား။ ၂၀၀၂ ကမ်ဘာ့ဖလားဆီမီးဖိုငျနယျတုနျးက အနိုငျယူခဲ့တဲ့ ဂြာမနျတှကေို လှလှပပကွီး ပွနျလကျစားခနြေိုငျခဲ့တဲ့အပွငျ လကျရှိခနျြပီယံအသငျးကို သူတို့နဲ့အတူ အိမျပွနျရအောငျ လုပျပွခဲ့တယျ။
ပယျနယျတီကြိနျစာဆိုး ပကျြပွယျခဲ့တဲ့ အင်ျဂလနျ
အင်ျဂလနျအသငျးအတှကျ ပယျနယျတီအဆုံးအဖွတျခံပွီဆိုရငျ ရှုံးဖို့က (၈၀)ရာခိုငျနှုနျးလောကျအထိ သခြောနပွေီလို့ ဆိုရမယျ။ အခုကမ်ဘာ့ဖလားမတိုငျခငျ အဓိကနိုငျငံတကာပွိုငျပှဲနောကျဆုံး(၁၂)ကွိမျမှာ အင်ျဂလနျအသငျး ပယျနယျတီအဆုံးအဖွတျ ခံယူခဲ့ရတာက (၆)ပှဲရှိခဲ့ပွီး တဈကွိမျသာ အနိုငျရခဲ့ဖူးတယျ။ ဒါကွောငျ့ ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလား ရှုံးထှကျ(၁၆)သငျးအဆငျ့ပှဲအဖွဈ ကိုလံဘီယာနဲ့ရငျဆိုငျခဲ့ရတုနျးက ပယျနယျတီအဆုံးအဖွတျ ခံယူခဲ့ရတဲ့အတှကျ ဒီတဈကွိမျမှာရော ပယျနယျတီကြိနျစာဆိုးက အသကျဝငျနဦေးမလားဆိုပွီး အင်ျဂလနျပရိသတျတှေ ရငျတထိတျထိတျနဲ့ပေါ့။ ဒါပမေဲ့ အင်ျဂလနျအသငျး ပယျနယျတီကွမ်မာဆိုးကို ခဖြေကျြပွနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ကိုလံဘီယာကို (၃-၄)ဂိုးနဲ့ အနိုငျရပွီး ဂိုးသမား ပဈဖို့ဒျ Pickford က အင်ျဂလနျအသငျးရဲ့ သူရဲကောငျးဖွဈခဲ့ရတယျ။
Flash သို့မဟုတျ ဘာပေ Mbappe
Super Hero တဈဦးဖွဈတဲ့ Flash ကို ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲမှာ ပရိသတျတှေ မွငျတှလေို့ကျရဲ့လား။ ပွငျသဈအသငျးရဲ့လူငယျကွယျပှငျ့ ဘာပေ Mbappe ဟာ ပွငျပလောကက Flash လို Hero တဈဦးလို့ တငျစားရငျ မှားမယျမထငျပါဘူး။ သူ့ရဲ့ လငျြမွနျတဲ့ပွေးအားကွောငျ့ ပွိုငျဘကျအသငျးက ခံစဈကစားသမားတှေ အလဲအလဲအပွိုပွိုဖွဈခဲ့ရတာက မနညျးမနောပါ။ ဗိုလျလုပှဲမှာ ဂိုးသှငျးပွီးခြိနျမှာ ၁၉၅၈ က ဘရာဇျီးလျ ဂန်ထဝငျပီလီ Pele နောကျပိုငျး ကမ်ဘာ့ဖလားဗိုလျလုပှဲရဲ့အသကျအငယျဆုံးဂိုးသှငျးသူ၊ ကမ်ဘာ့ဖလားဗိုလျလုပှဲမှာ ပါဝငျကစားခဲ့တဲ့ တတိယမွောကျ ဆယျကြျောသကျကစားသမား စတဲ့ဂုဏျပုဒျတှအေပွငျ ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲရဲ့ အကောငျးဆုံးလူငယျကစားသမားဆုကိုပါ ရယူခဲ့တယျ။
ကဲ. ..ပရိသတျကွီးရေ။ အခုဖျောပွခဲ့တာက ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲက အမှတျရစရာဖွဈရပျတှထေဲက တခြို့ကို ဖျောပွခဲ့တာဖွဈတာကွောငျ့ ကနျြခဲ့တာတှလေညျး ရှိကောငျးရှိပါလိမျ့မယျ။ ပရိသတျတှအေနနေဲ့လညျး ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲမှာ ကိုယျ့စိတျထဲ စှဲထငျကနျြခဲ့တဲ့အဖွဈအပကျြတှကေို ပွောပွခဲ့ပါဦးလား . .